Uyilo Lwangaphakathi, Igadi Kunye Neendlela Zokuphila | December 2021
Ukukhutshwa Kwangaphandle Ngo-2021
Umbala wePantone oMnye woNyaka ukusukela ngo-2000 ukuya ku-2021
Umbala wePantone woNyaka uhambe iminyaka engama-22, uchaphazela iimveliso kwifashoni, iimpahla zasekhaya, kunye noyilo lweshishini.
Iindlela ezili-10 ezilungileyo zekhitshi zango-2017-izimvo zoyilo lwangoku lwekhitshi
Makhe sijonge ezona ndlela zihle zoyilo zekhitshi zango-2017.
Yonke into ofuna ukuyazi malunga negadi yeentsomi
Fumanisa ukuba ungayenza njani igadi yentsomi kwaye ufumane izimvo zalo mkhwa umnandi kunye nomtsalane wegadi, ofanelekileyo kubo bobabini abantwana kunye nabantu abadala.
Ngo-2017: Elona khaya lishushu kunye neendlela zangaphakathi zoyilo
Unyaka ngamnye ubona imikhwa emitsha kwaye kufuneka-sibe neziqwenga esingenakulinda ukuba sizibeke izandla zethu kwaye sihlaziye amakhaya ethu ngazo.
Ikhitshi langoku-23 Uyilo lwale Khitshi lwanamhlanje lowama-2021, Ikhitshi elitsha
Fumana ezona ndlela zintle zekhitshi ngo-2021. Sityhila uyilo lwamva nje lwekhitshi kunye nemibono, nokuba yeyekhitshi elitsha okanye ukuhlaziya esele ikho.
Umbala wepeyinti kaBenjamin Moore woNyaka wama-2021: iTee yeAegean
I-Aegean Teal Umbala ka-Benjamin Moore woNyaka we-2021, umdibaniso omhle oluhlaza okotshani othanjiswe ngomphunga ongwevu odala ukuvumelana kwendalo.
I-Farrow kunye neBhola yepeyinti yokuHamba kweMibala ye-2021
Imibala ephezulu yeFarrow kunye neBhola ye-2021 ityhiliwe. Umgcini wombala, uJoa Studholme, uthetha ngemibala yepeyinti ephezulu yokuhombisa amakhaya ngayo.
Iitayile eziPhezulu zeGumbi lokuhlambela zika-2018 ukuza kuthi ga ngoku -Iingcamango zangasese zoyilo lwangoku
Ukusuka kwirose rose, ukuya kwiiradiyetha ezimnyama kunye neendawo zokuhlambela ezingwevu, landela ezi zimvo zihamba phambili zoyilo lokuhlambela ngo-2018 ukuza kuthi ga ngoku nokuba kwigumbi lokuhlambela okanye kwigumbi lokuhlambela.
Imithi yeKrisimesi yeKrisimesi yeyona Pinterest iphezulu yeKrisimesi ye-2019
I-Pinterest ityhile iindlela zayo zekrisimesi zango-2019, kubandakanya imithi yeKhisimusi kajongilanga kunye nozinzo. Zilungiselele ixesha lokonwaba ngokujonga ezi ndlela.
Umnyama Ngaba lehlobo lasehlobo kufuneka ukuba ube nombala wepeyinti yegadi
Nokuba ngabe ucingo, ishedi okanye ibhentshi, ukupeyinta igadi yakho emnyama yeyona ndawo ilungileyo yefanitshala kunye nezityalo, ityhila umyili we-Chelsea Flower Show u-Andrew Duff.
Imibala yeFarrow kunye neBhola ye-2019-I-De Nimes kunye neGumbi lokuSolinda iPinki ngaba zii-F & B's ekufuneka zenziwe ngepeyinti
Uphawu lwepeyinti lwaseBritane uFarrow kunye neBhola bathi imibala ebukhali ikwimeko, kwaye imibala yabo emibini ekufuneka ibenayo ngo-2019 yiDe Nimes kunye neGumbi lokuSulinga elipinki. Fumana ngakumbi kwi-Homebeautiful.com/uk.
I-Pinterest ityhila eyona mibono mihle yasekhaya yeKrisimesi yeKhisimusi ye2018-IPinterest yeKrisimesi
Ukusuka kwimiboniso yekhadi leKrisimesi yoyilo ukuya kwisongelo sesipho senkunkuma, uPinterest uyikhuphile Ingxelo yeMibhiyozo yeeholide ka-2018, edibanisa ezinye zezona zimvo zinkulu zinxulumene nekhaya zonyaka.
Indawo eluhlaza ebizwa ngokuba nguMbala wePantone woNyaka ka-2017
Olu luhlaza-tyheli-luhlaza luya kufaka intsholongwane ekhayeni lakho.
Umbala kaBenjamin Moore woNyaka we-2019 yiMetropolitan AF-690
Ipeyinti kaBenjamin Moore, iMetropolitan AF-690, umthunzi ongwevu ongwevu opholileyo, uye wabizwa njengombala ocacileyo wowama-2019. Fumanisa indlela yokwenza umthunzi usebenze ekhayeni lakho eHousebeautiful.com/uk.
Kungenxa yoko le nto ufuna imithi yomnquma ekhayeni lakho nasegadini
Yiza nomdibaniso weMeditera kwindawo yakho yokuhlala.
Umyili wangaphakathi utyhila iiNdlela eziPhezulu ze-10 zexesha elidlulileyo
Ukusuka kwiindonga ze-magnolia ukuya kuphahla lwepopcorn, ngaba kukho naziphi na ezi zinto zenziwe zagqitywa ekhaya eziye zavela ekhayeni lakho?
I-B & Q Yazisa ngePeyinti eNtsha yeKhaya elungileyo ukusuka kwi- £ 8-B kunye neP Pa
Imibala yepeyinti ye-B & Q: I-B & Q isungule uluhlu lwepeyinti yeGoodHome, enee-80 shades zokukhetha amakhitshi, izindlu zangasese, amagumbi okulala kunye neendonga zangaphandle, ukusuka kwi- $ 8 nje embizeni. Ukusuka kwi-terracotta ukuya kwi-metallics, le yimibala yepeyinti ye-B & Q GoodHome sonke siyakulangazelela. Fumana ngakumbi kwi-Homebeautiful.com/uk.
I-Coral ephilayo ngumbala wePantone woNyaka ka-2019
NGOKUPHELELEYO: I-Pantone ibhengeze i-Living Coral njengombala wePantone woNyaka ka-2019. Umthunzi o-orenji onesandi esiphantsi segolide utsala inkuthazo evela kwiingqaqa zekorale nakwimithombo yeendaba zentlalo.
UkuHanjiswa kweMigangatho yangaphakathi yombhoxo: iirugs njengobugcisa beWall
Iibhola zodonga yimikhwa ephezulu yangaphakathi yonyaka ka-2018. Ezi ziqwenga zengxelo zithatha indawo yobugcisa bemveli Nantsi indlela yokuxhoma ityali eludongeni ...
Ezona ziNdlela zaNdawo zoLungiso lwaseKhaya, ngokuSekwe kwiDatha yePinterest
Ukusuka kwiindawo zokupheka zasekhitshini ukuya kulungiso lokuhlambela, ezi zezona ndawo zithandwayo zokuhlaziywa kwamakhaya. Ngaba uxakekile uphupha iiprojekthi ezintsha? Bona ukuba yintoni ehamba ...
igumbi elimfusa nelingwevu
elf kwizimvo zakho
umbala wepeyinti we-2016